“အတွေးစလေးတွေ”: အဘိုး အလွမ်းပြေ ...
အဘိုး အလွမ်းပြေ ...
Personal တွေလျှော့ရေးမယ်စိတ်ကူးပေမယ့် ဒီ Post မှာတော့ စာရေးသူရဲ့ အဘိုးအကြောင်းကို တင်ဖြစ်လိုက် ပါတယ်။ စာရေးသူရဲ့ အဘိုးအကြောင်းက ခွတီးခွကျနိုင်တဲ့အကြောင်းကလွဲလို့ ဂုဏ်ယူစရာ သိပ်မရှိလှတာမို့ ကိုယ်ရည်သွေးရာတော့ ရောက်မယ်မထင်ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် မျိုးရိုးထဲမှာ ဘမျိုးဘိုးတူပြီး စာရေးဝါသနာ ပါခဲ့တာ လည်း စာရေးသူတစ်ယောက်ပဲရှိတာမို့ ဆုံးသွားတာ ၇ နှစ်ကျော်သွားပြီဖြစ်တဲ့ စာရေးသူရဲ့ အဘိုးအကြောင်း လေး အမှတ်တရပါ။
အဘိုးရဲ့ဇာတိက ရွှေဘိုနယ်က ကွမ်းတိုင်းရွာကပါ။ စကားပြောရာမှာ နာမည်ကြီးလှတဲ့ လှတောရွာတို့နဲ့ သိပ်မဝေးဘူးလို့တော့ စာရေးသူရဲ့ ဖခင်ကပြောပြဖူးပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်တော့ မရောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်
ဖခင်ဖြစ်သူပြောခဲ့တဲ့ လူဆိုး၊ လူမိုက်တော့တကယ်ပေါတဲ့ရွာဆိုတာပဲ အမှတ်ထင်ထင်ကျန်ပါတော့တယ်။ စာရေးသူလူမှန်းသိတတ်တဲ့အရွယ်မှာတော့ အဘိုးကအသက် ၆၀ တော်တော်ကျော်နေပါပြီ။ ဒါပေမယ့်
ငယ်ငယ်က ကာယဗလလိုက်စားတဲ့သူဖြစ်လို့ ကိုယ်ကာယကတော့ ကြံ့ခိုင်နေဆဲပါ။ ၁၅ နှစ်သားအရွယ် စာရေးသူနဲ့ အသက် ၈၀ နားကပ်နေတဲ့ အဘိုးတို့ လက်မောင်းချင်းအားပြိုင်လှဲကြရင်တောင် တစ်ခါတစ်ခါ
အဘိုးက ဦးမြကြီး၊ အဘွားက ဒေါ်နှင်းဆီဆိုတော့ သူ့ခေတ်သူ့အခါဆိုရင်တော့ လိုက်ဖက်ညီတဲ့ စုံတွဲလို့ခေါ်ရပါ့မယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အဲဒီခေတ်က အဆိုတော် ကိုမြကြီးက သူ့ချစ်သူ မနှင်းဆီကို ရည်စူး
ပြီးဆိုထားတဲ့ “ သို့ ... မခင်နှင်းဆီ ”သီချင်းကလည်း ခေတ်စားနေချိန်မို့ပါ။ အဘိုးနဲ့ အဘွားညားကြတာ ဒီသီချင်းကောင်းမှုပါချင်ပါမယ်လို့ တွေးမိပါတယ်။ တကယ်တော့ အဘိုးဟာ အင်္ဂလိပ်ခေတ်က ၉ တန်းအောင်
ဖြစ်ပေမယ့် သူ့ပညာကို မယ်မယ်ရရ အသုံးချခဲ့သူမဟုတ်ပါ။ ပညာတတ်အလွန်ရှားတဲ့ခေတ်ဖြစ်လို့ အလုပ်အလွယ်တကူ ရနိုင်ပေမယ့် ဘယ်အစိုးရအလုပ်မှမ၀င်ခဲ့ပါ။ အပြင်အလုပ်ကိုလည်း လက်ကြောတင်းအောင် မလုပ်ခဲ့ပါ။ ကာယဗလကိုသာ လိုက်စားပြီး ပျော်သလိုနေသူဖြစ်လို့ ခေတ်စကားနဲ့ ပြောရင်တော့ “၀ိတ်ပေါကြီး” ပါ။ ဒါကြောင့်ယောက်ဖဖြစ်သူက မနေသာပဲ သူ့ဆန်စက်မှာ မန်နေဂျာခန့်ရပါ တော့တယ်။ နှမအတွက် စိတ်ပူရှာလို့ထင်ပါရဲ့။
ဆန်စက်ကြီးဖြစ်လို့ တစ်ရက်တစ်ရက် ၀င်တဲ့ဝင်ငွေကမနည်းလှပါ။ ဒီငွေတွေကို ယောက်ဖစက်ပိုင်ကမကိုင်ဘဲ မန်နေဂျာအဘိုးကို သိမ်းခိုင်းထားပြီး သုံး၊ လေးလနေလို့ အသုံးလိုမှသာတောင်းလေ့ရှိပါတယ်။ ကြားကာလ
မှာ အဘိုးကိုဒီငွေတွေလှည့်သုံးပြီး လုပ်ငန်းလုပ်စေချင်တဲ့စိတ်ကူးနဲ့ပါ။ ဒါပေမယ့် ဦးတိကျအဘိုးက ဒီငွေတွေကို လက်ဖျားနဲ့တောင်မတို့ပဲ နေ့စဉ်အံဆွဲထဲမှာသော့ခတ်ထားပြီး ယောက်ဖစက်ပိုင်တောင်းမှသာ ထုတ်ပေးပါသ
တဲ့။ ကြာတော့ ယောက်ဖခမျာ မနေသာတော့ပဲ ဒီငွေကိုကိုင်ထားပြီး စပါးတို့ဘာတို့ဝယ်လှောင်ဖို့၊ လုပ်ငန်းတစ်ခုခုတွဲဖို့ ဖွင့်ပြောရှာရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဘိုးကတော့ ငါဝါသနာမပါဘူးလို့တစ်ခွန်းသာပြန်ပြောပြီး
နေမြဲတိုင်းနေတာပါပဲ။ ကောင်းလွန်းရှာတဲ့ ပလက်တီနမ်ယောက်ဖ စက်ပိုင်ခမျာဘာမှထပ်မပြောရဲရှာပါဘူးတဲ့။ နှမအတွက်တော့ အတော့်ကို စိတ်ပူရှာမယ်ထင်ပါရဲ့။
အဘိုးကအပြင်လူတွေ အပေါ်မှာကောင်းသလောက် မိသားစုအပေါ်မှာတော့ သံယောဇဉ်တော်တော့်ကို နည်းလွန်းပါတယ်။ သူ့ကာယဗလကို မိသားစုအတွက်ပဲ အသုံးချခဲ့ဟန်တူပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ထမင်းစားနေရင်း ငရုတ်သီးများစပ်သွားရင် ထမင်းစားပွဲကိုပင့်လို့ “ သွားရော့လဟယ်” ဆိုပြီး မှောက်ပစ်လိုက်ပါရောတဲ့။ သူနဲ့အတူတူ ထမင်းစားနေတဲ့သူတွေတော့ ထမင်းငတ်ပါလေရော။ သားသမီးတွေ ခမျာ သူနဲ့ထမင်းစားရင် သူ့မျက်နှာ ကြည့်ပြီး ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့စားရရှာပါတယ်။ တော်တော်ကို ပျော်စရာ ကောင်းမဲ့မိသားစုထမင်းဝိုင်းကို မြင်ယောင်ကြည့်မိပါသေးရဲ့။
ဒါတင်မကသေး သားသမီးတွေ တစ်ခုခုမှားရင် စကားနဲ့မဟုတ်ပဲ လက်နဲ့သာဆုံးမလေ့ရှိပါသတဲ့။ သူ့အယူအဆ ကတော့ ခပ်ရှင်းရှင်းပါ။ ကလေးတစ်ယောက်အတွက် ကြိမ်တစ်ခွေဝယ်ထားပြီး ငယ်ငယ်လေးကစလို့ ကြိမ်
ခွေရဲ့ အဖျားဘက်ကနေဖြတ်ဖြတ်ပြီး ရိုက်ဆုံးမရင် ကြိမ်ခွေကုန်လို့ ကလေးလည်းအရွယ်ရောက်ရင် လူလိမ္မာဖြစ်ကရောတဲ့။ ကောင်းလိုက်တဲ့ ပညာရှိပါပဲ။ သားသမီးတစ်ယောက်အပြစ်လုပ်မိတာကို မအားလို့၊ အခွင့်မသာ သေးလို့ ရိုက်ခွင့်မကြုံခဲ့ရင် အားတဲ့အခါခေါ်ပြီးဘာမပြောညာမပြော ရိုက်လေ့ရှိပါသတဲ့။ တစ်ခါတစ်ခါ အရိုက်ခံရတဲ့ သားသမီးခမျာ ဘာဖြစ်လို့ရိုက်သလဲဆိုတာတောင် ပြန်မေးယူကြရရှာပါတယ်။ မမေးရဲရင်လည်း ဒီလိုပဲ ဘုမသိ၊ ဘမသိ ခံကြရပါတယ်။ ဘယ်လောက်များဆိုးတဲ့ အဘိုးပါလိမ့်။
အဘွားခမျာလည်း အဘိုးရဲ့ ဆိုးမျိုးကို အတော့်ကိုခံရရှာပါတယ်။ ခက်တာက ဆေးလိပ်မသောက်၊ အရက်မသောက်၊ လောင်းကစားမလုပ်တဲ့ အဘိုးဆိုတော့ လူဆိုးခေါ်ရမှာလည်းခပ်ခက်ခက်ပါ။ လိမ္မာပြီး၊ မကောင်းတဲ့သူလို့များခေါ်ရင် ကောင်းမယ်ထင်ပါရဲ့။ သားသမီးတွေလူလားမြောက်ကြချိန်မှာတော့ အဘွားက အဘိုးနဲ့ခွဲပြီး သားသမီးတွေနဲ့ လိုက်နေပါတော့တယ်။ စိတ်နာလွန်းလို့ထင်ပါတယ်။ သေသည်အထိ အဘိုးနဲ့မတွေ့တော့ပါ။ အဘိုးအကြောင်းတောင် စကားထဲထည့်မပြောတော့ပါ။ အဘိုးကလည်း သားသမီး ၇ ယောက်မွေးထားပြီး ဖခင်တာဝန်ကျေအောင် မဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါ။ ဆန်စက်မန်နေဂျာဘ၀နဲ့ ဆန်စက်ဝန်းထဲမှာ နေကြပြီး ကိုယ်ပိုင်အိမ်တစ်လုံးတောင် ပိုင်အောင်မကြိုးစားပဲ သူ့ဖာသာပျော်သလိုနေခဲ့ပါတယ်။ အဘွားက ဆေးလိပ်ခုံထောင်ပြီး ပညာသင်ပေးခဲ့လို့သာ စာရေးသူတို့ဖခင်နဲ့၊ ဖခင်ရဲ့ အစ်ကိုကြီးတို့ ဘွဲ့ရခဲ့ကြပါတယ်။ ကျန်သားသမီးတွေတော့ ပညာကောင်းကောင်းမသင်လိုက်ရပါ။
အဘိုးရဲ့ အထင်ရှားဆုံးဝိသေသကတော့ စာရေးတာဝါသနာပါလွန်းခြင်းပါ။ အားတဲ့အချိန်တိုင်း သားသမီးတွေ ဆီပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မိတ်ဆွေတွေဆီပဲဖြစ်ဖြစ် စာရေးနေတာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ စာရေးဝါသနာ ကြီးလွန်းပုံက
စက်ထဲမှာနေ့စဉ်တွေ့နေရတဲ့ ယောက်ဖဆန်စက်ပိုင်ကို ပြောစရာတစ်ခုခုရှိရင် စကားနဲ့မပြောဘဲ စာနဲ့ရေးပြီးပေးလေ့ရှိပါတယ်။ “မြကြီးရာ မင်းနဲ့ငါ နေ့တိုင်းတွေ့နေတာပဲ၊ ပါးစပ်ကပြောလည်းရပါတယ်” လို့ပြောယူတာလည်း စာပေးတဲ့အကျင့်ကို မပြင်ခဲ့ပါဘူးတဲ့။ စာရေးသူကိုယ်တိုင် စာမရေးရရင် မနေနိုင်တာ အဘိုးသွေးနည်းနည်းပါလာဟန်တူပါတယ်။ ကောင်းမွေဖြစ်လို့ ကျေကျေနပ်နပ်လက်ခံလိုက်ပါတယ်။
အဘိုးရဲ့နောက်ထပ်ဝါသနာက လမ်းပြင်တာနဲ့ သန့်ရှင်းရေးလုပ်တာပါပဲ။ ဘယ်သားသမီးအိမ်မှာနေနေ မနက်စာထမင်းစားသောက်ပြီးရင် လက်နက်အစုံအလင်ယူပြီး လမ်းပြင်ပါတော့တယ်။ တစ်ခါတစ်ခါ
စာရေးသူကိုပါ “ငါ့မြေးရ၊ လမ်းပြင်တာ နတ်ပြည်ရောက်သကွ” ဆိုပြီး လုပ်အားပေးခိုင်းပါသေးတယ်။ နတ်ပြည်ရောက်ချင်တာထက် အဘိုးကိုကြောက်တာကြောင့် လမ်းလိုက်ပြင်ရပေါင်းများပါတယ်။ အဘိုးဟာ
ခြံထဲကိုလည်း တစ်ရက်နှစ်ကြိမ်လောက် တံမြက်စည်းလှဲရမှ နေသာထိုင်သာရှိတတ်ပါသေးတယ်။ ဒါတောင် ထိုင်နေရင်းသစ်ရွက်ကြွေတာမြင်ရင် တံမြက်စည်းကောက်ပြီးလှဲတဲ့ အကြိမ်မပါသေးပါ။ အ၀တ်အစား
ကိုလည်း အသက် ၈၀ ကျော်ထိ ကိုယ်တိုင်လျှော်ရမှ စိတ်တိုင်းကျလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါတော့ ကောင်းတဲ့အကျင့် လေးတွေလို့ဆိုရပါလိမ့်မယ်။
ငယ်စဉ်က သားသမီးတွေအပေါ်မှာ ဖခင်ကောင်းဖြစ်အောင် မကြိုးစားခဲ့တဲ့အဘိုးခမျာ အိုလာတဲ့အခါ ဒုက္ခတွေ့ ရှာပါတော့တယ်။ အသက်ကြီးလို့စိတ်သွားလို့ကိုယ်မပါတော့တဲ့အရွယ်မှာ စကားများလာတဲ့ အဘိုးကို သားသမီးတွေက သည်းညည်းမခံချင်ကြတော့ပါ။ အဘိုးကလည်း ရိပ်သာသွားပြီးတရားထိုင်တာတောင် ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးနဲ့စကားများပြီး ညတွင်းချင်းအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အထိ ဂန္ထ၀င်မြောက်အောင် လက်ပေါက် ကပ်သူဆိုတော့လည်း အရွယ်ရောက်လာတဲ့သားသမီးတွေက ရှက်ကြတာလည်းပါမယ်ထင်ပါတယ်။ ကြီးကောင်ကြီးမနဲ့ သားသမီးတစ်ယောက်နဲ့အဆင်မပြေရင် နောက်တစ်ယောက်အိမ်ပြောင်း၊ နောက်တစ် ယောက်နဲ့ အစေးမကပ်ရင်နောက်ထပ်တစ်ယောက်ဆီပြောင်းရင်း ဘော်လီဘော ပုတ် သလို ပုတ်တာခံရပါ တော့တယ်။ နောက်ဆုံးတော့ သားအငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ စာရေးသူရဲ့ဖခင်ဆီမှာပဲ ခေါင်းချရရှာ ပါတယ်။ မသေခင်က စာရေးသူရဲ့ဖခင်ကလာနေဖို့ပြောတိုင်း မင်းတို့အိမ်မနေတတ်ပါဘူးလို့ငြင်းခဲ့ပေမယ့် နောက်ဆုံးမှာတော့ မငြင်းနိုင်တော့ရှာပါ။ စည်းစံနစ်တကျနေတတ်လို့ သူကြည့်မရတဲ့ သားငယ်ဆီမှာပဲ ခေါင်းချသွားရပါတော့တယ်။ မသေခင်အချိန်ထိ စာရေးသူရဲ့ဖခင်ကို ကုသိုလ်တွေ အများကြီးပေးသွားခဲ့တယ် လို့ဖခင်ကပြောလို့ ဖခင်ကိုလေးစား၊သနားမိပါတယ်။ အဘိုးအကြောင်းကို စာရေးသူလည်း တော်တော်များများ သိထားသူမဟုတ်ပါလား။
အဘိုးကလည်း အဘိုးဖြစ်ပါတယ်။ သားတွေသမီးတွေနဲ့အဆင်မပြေသလို မြေးတွေနဲ့ပါ အစေးမကပ်ပါ။ စာတင်လောက်အောင် ကပ်စေးနှဲတာလည်းပါသေးရဲ့။ စာရေးသူတစ်သက်လုံးမှာ အဘိုးဆီက မုန့်ဖိုး၂၀၀ သာရဖူးပါတယ်။ ဒါတောင် ဆယ်တန်းအောင်လို့ ဆေးကျောင်းတက်ကာနီး အဒေါ်တွေဆီအလည်သွားရင်း အဘိုးက“ ငါ့မြေးကိုဂုဏ်ပြုရမယ်” ဆိုပြီး ၅၀၀ တန် တစ်ထပ်ကြားက ခက်ခက်ခဲခဲရှာပြီးပေးတာပါ။
စာရေးသူရဲ့ဖခင်ကတော့ “ ငါ့သား၊ အဲဒီပိုက်ဆံ ရွှေချထားကွ။ ငါ့တစ်သက်လုံးမင်းအဘိုးဆီက မုန့်ဖိုးတစ်ပြားမှမရဖူးဘူး” လို့အားပေးပါတယ်။ စာရေးသူ ၆ တန်းကျောင်းသားဘ၀လောက်က အဘိုးဆီအလည်ရောက်တော့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကိုခေါ်သွားပြီး လက်ဖက်ရည်တိုက်ပုံကလည်း စံတင်လောက်ပါတယ်။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရောက်တော့ “လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်ခွဲ” ဆိုပြီးမှာပါလေရော။ အားလုံးက၀ိုင်းကြည့်ကြပေမယ့် သူကတော့ ခပ်တည်တည်ပါ။ စာရေးသူကတော့ ရှက်လွန်းလို့နေစရာတောင်မရှိတော့ပါ။ ဆိုင်ရှင်ကဘယ်လိုဖျော်ရမလဲမေးတော့ “တစ်ခွက်ခွဲစာဖျော်ပြီး နှစ်ခွက်မျှထည့်လိုက်”ဆိုပြီးတောင် ဆရာလုပ်လိုက်ပါသေးတယ်။ အနှမြောမှာတော့ စံတင်လောက်တဲ့ အဘိုးအကြောင်းတစ်ခါတည်းနဲ့မှတ်လောက်သားလောက်အောင်သိသွားတော့တာမို့ နောက်ကိုဘယ်တော့မှ အဘိုးတိုက်မဲ့ လက်ဖက်ရည်မသောက်ရဲတော့ပါ။ စာရေးသူ Second MB ကျောင်းသားဘ၀မှာတော့ အဘိုးဆီက ဖလံထည်အင်္ကျံတစ်ထည် ရပါတယ်။ ရတောင့်ရခဲမို့ အမှတ်တရသိမ်းထားခဲ့တာ အခုချိန်ထိ ဘယ်မြို့ကိုပြောင်းပြောင်း ပါအောင်ယူခဲ့တာ အ၀တ်ဗီရိုထဲမှာ ခုထိရှိနေဆဲပါ။ အဲဒီအင်္ကျံလေးမြင်တိုင်း အင်မတန်မှ ခွတီးခွကျနိုင်လှတဲ့ သွားလေသူအဘိုးကို သတိရနေဆဲပါ။
ဖြစ်လေရာဘ၀တိုင်းမှာ ဖခင်ကောင်းပြီသစွာနဲ့ သားသမီးတိုင်းရဲ့လေးစားမြတ်နိုးခြင်းကို ရနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် အဘိုးခင်ဗျား ...
Posted by Han Kyi at 10:37:00 am
ကောင်းကွက်လေးတွေကလဲ ချစ်စရာလေးတွေပါ။ အမေ့ ရဲ့ အစ်ကိုကြီးကို သတိရမိတယ်။ သူက တော်တော် ခွတိ ခွကျပါပဲ..ဒါပေမယ့် အလုပ်ကိုတော့ သေအောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ လူစားမျိုးပါ။ အစာအိမ်သွေးကြောပေါက်ပြီး သေသွားတဲ့အထိ အလုပ်ကိုလုပ်သွားခဲ့တယ်။ ဒီပိုစ့်လေး ဖတ်ရတော့ ဦးကြီး ကို အရမ်း သတိရမိတယ်။
ဘ၀ရဲ့တွန်းအား . . .
မဆုံးတော့တဲ့ မနက်ဖြန် ...
၂၀၁၀ သင်္ကြန်ခရီးစဉ် ( မဲ့ဆောက် )
၂၀၁၀ သင်္ကြန်ခရီးစဉ် ( ဘားအံကအပြန် )
၂၀၁၀ သင်္ကြန်ခရီးစဉ် ( ဘားအံ )
၂၀၁၀ သင်္ကြန်ခရီးစဉ် . . .
ဘ၀နဲ့ပတ်သက်လို့. . .
“ မိမိပစ္စည်း၊ မိမိတာဝန် ... ”
Camera လေးဝယ်လိုက်လို့ ...
“ဆန္ဒ” ငါ့ဘ၀မှာ ထိရှများစွာ ဒဏ်ရာတို့နှင့် ကွဲကြေ...
မျှော်လင့်ရင်မော မှော်ရုံတောမှာ ...